बुर्तिबाङमा अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो महासंघ, भिमगीठेमा मोटरवाटो निर्माण उपभोक्ता समिति गठन ! – ebaglung.com
२०७३ माघ २३, आईतवार ०६:५७	थप समाचार
बुर्तिवाङ २०७३ माघ २३ । छानहुन अन्तराष्ट्रिय तेक्वान्दो महासंघ बागलुङको जिल्लास्तरिय शनिवार बुर्तिबाङमा सम्पन्न भएको छ । भेलामा छानहुन अन्तराष्ट्रिय तेक्वान्दो महासंघ बागलुङका केन्द्रीय अध्यक्ष कुल बहादुर बुढा मगरको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो यस्तै छानहुन अन्तराष्ट्रिय तेक्वान्दो महासंघ बागलुङको संरक्षक समितिका अध्यक्ष सहविन अर्गेजाको विशिष्ट आतिथ्यता रहेको भेलाले, परिचय घर्ती मगरको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय जिल्ला समितिको गठन गरेको छ । जसको उपाध्यक्षमा लेखनाथ खरेल, सचिवमा कर्ण प्रर्तेल “करण”, सहसचिवमा प्रदिप विक्रम शाही, कोषाध्यक्षमा मदन रसाईली सहित अरु सदस्यहरु रहेका छन् ।
यसैबीच भेलाले सल्लाहाकार सदस्यमा हिमाल विकलाई चयन गरेको छ भने यम रसाईलीलाई जिल्ला इन्चार्जको रुपमा समेत चयन गरेको बताईएको छ । पूर्व अध्यक्ष हिमाल वि.क को अध्यक्षता रहेको भेलाको सहजीकरण समितिका सचिव कर्ण प्रतेल “करण”ले गरेका थिए ।
यसैवीच शनिवार नै भिमगीठे गाउँ विकास समितिमा मोटरवाटो निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिको गठन भएको छ । साँसद क्षेत्र विकास पूर्वाधार विष्ोश कार्यक्रम अन्तरगत विनियोजन भएको ११ लाख तथा गाउँ विकास समितिको ५ लाख गरि १७ लाखको वजेटमा उक्त मोटरबाटो निर्माण गरिने भएको छ ।
भिमगीठेको वडा नं. १ गाँव—माझखर्क असारे, पात्ले थाम हुँदै खुँगा बुर्तिबाङ—खुँगा जोडने मोटरबाटो निर्माण समितिका अध्यक्ष चिन्तामणी शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठक तथा उपभोक्ता भेलाले, जग बहादुर घर्तिको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय निर्माण समिति गठन गरेको हो । जस्को उपाध्यक्षमा जितबहादुर घर्ति, सचिवमा खगेन्द्र कुमार बुढा, कोषाध्यक्षमा पवित्रा थापा सहित अरु सदस्यहरु रहेका छन् ।
मौलिक संस्कार संरक्षणका लागि बुर्तिबाङमा बन्यो ब्रह्माण क्षत्री प्रतिष्ठान !